PSJTV | तीन विधेयक नहुँदा के हुन्छ ?
तीन विधेयक नहुँदा के हुन्छ ?
संसद्बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ । यसले सरकारलाई खर्चको अख्तियारी पनि दिएको छ ।
‘विनियोजन विधेयक पारित गर्नु र बाँकी विधेयक त्यत्तिकै छाड्नु भनेको मान्छेको टाउको छिराएर जिउ अड्काउनुजस्तै हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले भने, ‘यो संसद्को जिम्मेवारी हो, यसरी अड्काउनु हुन्न थियो ।
सरकारले ऋण उठाउन संसद्सँग अग्रिम सहमति लिने प्रक्रिया हो राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक । यो विधेयक संसद्बाट पारित नभएसम्म सरकारले बजेटमा भनेजस्तो ऋण उठाउन पाउँदैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र एक अर्ब ११ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । स्वदेशी तथा विदेशी ऋण लिँदा सरकार जमानत बस्नुपर्छ ।
सरकार जमानी नबसी ऋण उठाउन नपाइने भएकाले यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ । यस्तै, सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको ६ महिनामा कर विधेयक पारित नभए अघिल्लो वर्षकै राजस्व दरमा कारोबार गर्नुपर्छ । ६ महिनासम्म भने नयाँ दर लागू गर्न सकिन्छ । यो वर्ष सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।